Navotsotra ary mbola miandry fitsarana ireo mpanao gazety Mozambikana taorian’ny volana maromaro nitanana azy · Global Voices teny Malagasy
Navotsotra ary mbola miandry fitsarana ireo mpanao gazety Mozambikana taorian'ny volana maromaro nitanana azy
Samy notanana izy roalahy taorian'ny fitantarana ny fanafihana tany avaratra.
Voadika ny 11 Mey 2019 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Español, русский, Swahili, Ελληνικά, Português
Ilay mpanao gazety Amade Abubacar. Sary: Pikantsary tao amin'ny caiccajuda/Youtube.
Navotsotra ny 23 Avrily 2019 ary mbola miandry fitsarana ireo mpanao gazety Amade Abubacar sy Germano Adriano, izay notanana tany am-piandohan'ity taona ity raha nitantara ny fifandonana ara-miaramila tany avaratr'i Mozambika.
Nosamborina tamin'ny 5 Janoary i Amade, izay nandray anjara tamin'ny sehatra fampahalalam-baovao isankarazany ao an-toerana ao anatin'izany ny Zitamar News sy A Carta, teo am-panaovany antsafa ireo olona nafindra toerana tao amin'ny distrikan'i Macomia ao Cabo Delgado, faritany avaratry ny firenena. Nanjavona tamin'ny 6 Febroary ary fantatra fa nogadraina tamin'ny 18 Febroary i Germano, mpanangom-baovao ao amin'ny onjam-peo Nacedje an'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana .
Araka ny filazan'ny Ivotoeran'ny Fampitam-baovao any Atsimon'i Afrika (MISA), voampanga ho “nanaparitaka hafatra manala-baraka ireo mpikambana ao amin'ny Sampam-piarovana Mitam-piadiana Mozambikana tao amin'ny kaonty Facebook i Amade sy i Germano izay nanambaran'izy ireo ny fanafihana nitranga tany ambanivohitry ny distrikan'i Macomia.”
Navoaka tao amin'ny fonjam-paritany Mieze any Pemba, renivohitr'i Cabo Delgado ireo mpanao gazety ireo ary nafahana arahim-pepetra raha eo am-piandrasana ny fitsarana azy ireo eo anoloan'ny fitsarana any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado. Hatao ny 17 May ny fotoam-pitsarana voalohany .
Nanomboka hatramin'ny taona 2017, nanao fanafihana ireo tanànakely any Cabo Delgado ny vondron'olona nitondra antsy ary nandoro trano maro sy nanapa-doha ireo mponina. Olona maherin'ny 90 no maty hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana, araka ny filazan'ny polisy. Hatramin'izao, tsy mbola misy ny vondrona nilaza ampahibemaso ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana.
Tamin'ny volana Desambra 2018, nanambara ny fisian'ny pejy Facebook iray , mitondra ny anarana izay toa hita fa hosoka ary nidera ny fanafihana nataon'ilay vondrona mitam-piadiana tao Cabo Delgado ny gazety A Carta de Moçambique.
Tsy fantatra raha misy hifandraisany na tsia amin'ity pejy ity ny fiampangana an'i Amade sy Germano. Nilaza ny ekipa mpiaro ny mpanao gazety fa tsy misy fifandraisana eo amin'izy ireo ilay hetsika tsy ara-dalàna tao amin'ny Facebook.
Nahitana tsy fanarahan-dalàna ny fizotran'ny fanenjehana ireto mpanao gazety ireto. Taorian'ny nitazonana an'i Amade, napetraky ny polisy tany amn'ny fonjan'ny miaramila izy. Nogadraina tao amin'ny fonjan'ny miaramila ary nijanona tao nandritra ny 12 andro tsy nahazoana vaovao talohan'ny namindrana azy tany am-ponja sivily.
Tamin'ny 16 Aprily ireo mpanao gazety vao voampanga izay manitsakitsaka ny fe-potoana 90 andro voatondro ao amin'ny Lalàna Mozambikana momba ny Fanagadrana Vonjimaika amin'ny raharahan'i Abubacar.
Nandritra ny famotorana tamin'ny fanagadrana vonjimaika azy ireo, dia samy voampanga tamin'ny “heloka bevava manitsakitsaka ny tsiambaratelom-panjakana amin'ny alàlan'ny fitaovana nomerika sy ny fandirisihana ny vahoaka amin'ny heloka bevava amin'ny fampiasana ny fitaovana nomerika ” ireo mpanao gazety ireo. “Tsy mitovy amin'ireo fiampangana voarakitra an-tsoratra anefa ireo fiampangana izay hanenenjehana azy ireo amin'izao fotoana, izay nofaritan'i MISA ho “fampielezana hafatra manala-baraka natao tamin'ireo mpikambana ao amin'ny Sampam-piarovana Mitam-piadiana Mozambikana tamin'ny alàlan'ny kaonty Facebook izay nanambara ny fanafihana nitranga tany ambanivohitry ny distrikan'i Macomia.”
Niatrika tsy fahampian-tsakafo sy tsy nahazo fanampiana ara-pitsaboana i Abubacar nandritra ny 106 andro nigadrany tany am-ponja, araka ny Amnesty International . Nilaza tamin'ny gazety @Verdade ny fianakaviany fa tsy navela hitsidika azy nandritra ny fotoana rehetra nijanon'i Abubacar tany am-ponja izy ireo.
Mety ho anisan'ny fironana amin'ny fampitahorana ireo mpiasan'ny fampitam-baovao any avaratr'i Mozambika ny zava-nitranga tamin'ireto mpanao gazety ireto. Notànana tamin'ny volana Desambra 2018 i Estácio Valoi, mpanao gazety tsy miankina mpanao fanadihadiana, mbola tany Cabo Delgado ihany koa tao anatin'ny dingam-pitsarana mampiahiahy. Noafahana tsy nisy fiampangana izy taty aoriana kely saingy nijanona tany amin'ny fonjan'ny miaramila ny fitaovam-piasany.
Mitaky ny rariny
Nankalaza ny vaovao i Cídia Chissungo, mpikatroka sady mpikarakara ny fanentanana #AfahoAmade:
AFAKA ihany i Amade Abubacar sy Geramano Adriano
taorian'ny efa ho 4 volana nigadrana.
Mazava ho azy fa tsy maintsy mankalaza izany isika saingy tsy hanadinontsika ny nanombohan'ny zava-drehetra. Hoy isika efa ela:
Tsy heloka ny asa fanaovan-gazety
Misaotra noho ny fanohananao
Naneho hevitra i Angela Quintal, mpandrindra ny Fandaharan'asan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety (CPJ) misahana an'i Afrika:
Amin'izao fotoana izao mba hanomezan-toky dia nesorina ny fiampangana ary afaka manohy ny asany fanaovan-gazety tsy misy tahotra fanenjehana i Amade Abubacar. Tsy rariny ny tsy maintsy niaretany tany am-ponja tsy nisy fitsarana nandritra ny 106 andro talohan'ny nanafahana azy vonjimaika. Tsy tokony hiatrika fitsarana akory aza izy!